Iingcebiso ezi-5 zokukhulisa ishishini lakho ngeSelfowuni | Martech Zone
NgoLwesibini, Novemba 30, 2010 NgoLwesibini, Septemba 4, 2012 Douglas Karr
UluvoLab utyhile iingcebiso ezintlanu eziya kuthi zincede iinkampani ziphucule amava okuhamba nokutsala abathengi abatsha:
Qala ngamava omsebenzisiAmava omsebenzisi olungileyo kukuthathelwa ingqalelo okuphumeleleyo kweselfowuni. Rhoqo, iinkampani zizama ukulinganisa ukusebenza kwewebhusayithi yesiqhelo kwiipropathi zazo ezihambayo. Ukuqinisekisa ukusetyenziswa ngokukuko kweselfowuni, jolisa kubo bobabini abathengi kunye neemfuno zeshishini, ezinokwahluka ngokubonakalayo kwezo zewebhu yemveli. Izinto ezilula njengobungakanani bamaqhosha (ngaba zinkulu ngokwaneleyo?) Kunye nokuqinisekisa ukuba ukuskrola ecaleni ukuya kwelinye icala kuhlala kungakhathalelwanga kwimizamo yokuqala kwaye kunokugubungela owona msebenzi ubalaseleyo. Qala ngokumamela abathengi bakho: fumana ukuba bafuna ukuzibandakanya njani nenkampani yakho ngesixhobo esiphathwayo kunye nendlela abasebenzisa ngayo ngoku ishaneli yokufezekisa iinjongo zabo. Qiniseka ukuba uphuhlisa amaqonga eselfowuni afanelekileyo kwiimfuno zabathengi, kwaye uqiniseke ukuba iseti yempawu yakho ithatha imiceli mngeni eyodwa yamava eselfowuni ukuba ayithathele ingqalelo.
Sukucinga ukuba ufuna iapp: Kwamanye amashishini, wenza ngokuqinisekileyo; kwabanye, akufanelekanga ukuba utyalomali, kwaye uya kwenza ngcono ukutyala imali kwi-webhu yakho yeselula. Linganisela iingenelo neengozi: IiWebhusayithi eziSelfowuni zinomtsalane kwintengiso enkulu kwaye zinokufikeleleka ngazo zonke iintlobo zezixhobo eziphathwayo. Kodwa ngelixa ii -apps zeselfowuni zifikelela kubantu abambalwa kuneewebhusayithi ezihambayo, uninzi lwamashishini e-niche akhetha eli jelo lokuthengisa, njengoko libonelela abathengi ngamava awodwa, ajolise ngokukodwa kwii-smartphones.
Sukucinga ukuba iselfowuni ihlala ithetha ukuhamba: Qinisekisa ukuba unikezela ngekhonkco ebonakalayo kwiwebhusayithi yakho epheleleyo kuye nakubani na ofuna ukufikelela kuyo. Isityalo esikhoyo ngoku se-smartphones sinokuhamba ngokulula kwiiwebhusayithi ezininzi, kwaye inyani kukuba uninzi lweesayithi ezihambayo aziboneleli ngokufikelela kwiimpawu ezifanayo ezifumaneka kwiwebhusayithi epheleleyo- izinto ezifunwa ngabakhenkethi abaninzi okanye abafuna ukuzisebenzisa xa besendleleni . Ngelixa kulula ukuba ujonge ibhalansi yeakhawunti yakho yasebhanki ngeselula ephathekayo, kunokuba nzima ukuhlawula ityala usebenzisa icandelo lokuhlawula ityala lesiza esipheleleyo esingazange sifakwe kwiselfowuni.
Lungiselela esele ikhona, iitekhnoloji zasimahla zeselfowuni ukunxibelelana nabaphulaphuli abahambahambayoNokuba ziphi na izixhobo zenkampani yakho ezityalwe kakhulu kwi-app yeselfowuni, uninzi lweetekhnoloji esele zikho zinokukunceda ukunxibelelana nabaphulaphuli abahambahambayo ngaphandle kotyalo-mali olukhulu kuphuhliso lwetekhnoloji. Ukuthandwa kweenkonzo ezisekwe kwindawo ezinje ngeZikwere ezine kunye neFacebook Iindawo zitshintshile indlela iimveliso ezinokuthengisa ngayo kubathengi abahambahambayo ngokuvumela amashishini ezitena kunye nodaka ukuba achonge ngokulula kwaye avuze abathengi abathembekileyo ngezaphulelo kunye nezaphulelo. I-DialogCentral ngomnye umzekelo wetekhnoloji yasimahla yeselfowuni ekhuthaza ukubandakanyeka: ukusebenzisa esi sixhobo, abathengi banokuthumela ingxelo ngqo kumashishini ngelixa besendleleni, kwaye amashishini anokufumana izimvo zabathengi zexesha lokwenyani ngaphandle kwentlawulo.
Sebenzisa isikhokelo sokulinganisa esisebenzayo: Uninzi lwamashishini namhlanje awanazo izixhobo zokulinganisa ngokufanelekileyo imizamo yabo yokuhamba. Okokuqala, thatha inyathelo umva kwaye uqwalasele ngononophelo ukuba yintoni enokuthi kwaye kufuneka ilinganiswe. Kwiindawo ezihambayo, iimethrikhi eziqhelekileyo azisasebenzi, ke jonga amanyathelo aza kujongana nawo onke amajelo ebrendi yakho yanamhlanje, njengokubandakanya abathengi. Emva koko, chaza iiparameter eziyimfuneko ukufaka la manyathelo kwiimpawu ezizodwa zeshishini lakho. Cinga nge-opt-in, evulekileyo yokubhala ingxelo njengenxalenye yenkqubo yakho yokulinganisa ukuqinisekisa ukuba useka izigqibo kwiimfuno zabathengi endaweni yokucinga.
Njengoko abathengi abaninzi bexhomekeke kwizixhobo zabo eziphathwayo nakwizinto zokusebenza eziphathwayo kuyo yonke into ukusuka ekuthengeni kwi-Intanethi ukuya kubhukisha iiholide, ukubhankisha, kunye nokuhlawula amatyala, amashishini kufuneka enze amava omthungo angenamthungo kwaye amamele ukuba bathini abathengi babo ngabo. URand Nickerson, u-CEO weZimvoLab
tags: ukukhula kwefowuniurhwebo mobile
Mar 25, 2011 ngo-4: 33 AM
Amanqaku amahle okuphuhlisa ishishini ngeselula…